Ukungabinakho ukujongana nolawulo-iCazoo
Ikhaya » Ikhaya » Ukungakhuseleki
tag: Uhlaselo lwama-51%, Ukungakhuseleki, Ubungqina Bomsebenzi
Ukungafikeleli kuthetha ukungakwazi ukutshintsha. Kwisayensi yekhompyuter, into engaguqukiyo into imeko yayo ayinakutshintshwa emva kokudalwa kwayo.
Ukungabinakho ukusebenza yenye yeempawu eziphambili zeBitcoin kunye ne-blockchain technology. Iitransekshini ezingahambisekiyo zenza ukuba kungabikho naliphi na iqumrhu (umzekelo, urhulumente okanye inkampani) lokusebenzisa, ukubuyisela endaweni okanye ukukhohlisa idatha egcinwe kwinethiwekhi.
Ukusukela lonke unaniselwano lwembali ingahlolwa nanini na, Ukungaguquguquki kuvumela inqanaba eliphezulu le- ukuthembeka kwedatha.
Ukungaguquguquki kweebhloko blockchains kunokuphucula inkqubo yangoku yokuthembela kunye nolawulo, kwaye kunganciphisa ixesha kunye neendleko zophicotho njengoko ukuqinisekiswa kolwazi kuba lula ngakumbi okanye kungafuneki kwakhona.
Ukungabinakuchaphazeleka kungonyusa ukusebenza kweenkampani ezininzi ngokuzinika ithuba lokugcina irekhodi elipheleleyo leenkqubo zeshishini labo. Ukungabinakuchaphazeleka kunokubonelela ngokucacileyo kwiingxabano ezininzi zomdibaniselwano, njengoko kuvumela ukuba kungqinwe kwaye kwabelwane ngomthombo wenyaniso.
Ngelixa ukungaguquki sesinye sezibonelelo eziphambili zeBitcoin kunye netekhnoloji ye-blockchain, idatha egcinwe kwii-blockchains ayinakuchasana ngokupheleleyo nokuba sesichengeni: ukuba umhlaseli ukwazile ukuqokelela uninzi lwenqanaba le-hash yenethiwekhi- khawuleza, inokutshintsha enye idatha engenakuchaphazeleka kuhlaselo olwabizwa Uhlaselo lwama-51%.
Kwimeko enjalo umntu ophethe i-51% ye-hashrate unokuthintela ukuthengiselana okutsha ekufumaneni iziqinisekiso okanye ukubuyisa umva ngokupheleleyo ukuthengiselana. Ngaba kunokwenzeka nakwiBitcoin? Ewe ifuna amandla amakhulu, izixhobo ezibiza kakhulu, kunye nezixa ezikhulu zombane.
Kwelinye icala, iinethiwekhi Ubungqina Bomsebenzi ngamaxabiso asezantsi asengozini yokuba sesichengeni sokuhlaselwa, kuba ukuqokelela inani elifunekayo lamandla okuhlasela uthungelwano ayisiyonto ingenangqondo leyo.
Inqaku elilandelayoImbali yeBlockchain
UKUHLAZIYIWE: Ungazifumana njani ezo thokheni zenza iX100 ngaphambi kokuba ihambe kakhulu?